Nhau - Yakanakisa squash yekudzidzisa muchina S336 siboasi brand
Yakanakisa squash yekudzidzisa muchina S336 siboasi brand
Chii chinonzi squash?
Squash mutambo wemakwikwi uyo mukwikwidzi anorovera bhora rebound kumadziro nereketi maererano nemimwe mitemo mudare rakavharirwa nemudhuri.Squash yakagadzirwa nevasungwa mumajeri ekuLondon mukutanga kwezana ramakore rechi 19 apo vaive vasina chekuita. nekurovera kumadziro kumadziro kuita maekisesaizi uye kugadzirisa mamiriro ehupenyu hwejeri.
Muzana ramakore rechi20, squash yakave yakakurumbira, uye matekiniki uye matekiniki akagadzirwa zvakare.Muna 1998, squash yakanyorwa sechiitiko chepamutemo cheBangkok Asian Games.Sangano repamusoro-soro pasi rose reSquash iWorld Squash Federation, iyo yakavambwa muna 1967 kuti ifambise kusimudzirwa kwesquash pasi rose.
Chii chinonzisquash bhora kupfura muchina ?
Thesquash bhora muchinainovimba nemavhiri maviri ekupfura kusvina bhora re squash kupfura kunze.Iyo inozivikanwa brand yesquash bhora rekutanga muchinainonzi "Siboasi".TheSiboasi squash kudzidzisa muchinaine turntable, iyo inogovera mabhora e squash kumavhiri maviri ekupfura.Motokari inotyaira mavhiri maviri ekupfura kupfura mabhora nekutenderera nekukurumidza.
PopularS336 siboasi squash yekudyisa bhora muchina :
1. AC (Magetsi) uye DC (bhatiri) ose ari ok;
2. Inotakurika, mu21 Kgs chete, iri nyore kutora chero kupi;
3. Nemavhiri anofamba, famba-famba zviri nyore mudare;
4. Aigona kubata 80 squash mabhora;
5. Ne smart remote control ;
6. Lithium rechargeable bhatiri : Inogona kutamba chero nguva pakuchaja kwakazara kunyangwe pasina simba remagetsi;
7. Kubva ku110-240V nemapulagi akasiyana anodiwa kuti asangane nevatengi vepasi rose;
8. Mabasa makuru: Inogadziriswa kumhanya uye frequency, kona nezvimwe;Self-programming kune dzakasiyana nzira dzekudzidzisa;Random bhora, fixed point bhora, cross line bhora, topspin, back spin;
Zvinotsanangurwa zveSiboasi S336 squash kupfura muchina:
Nhamba yechinhu: Siboasi S336 Squash bhora rekudyisa muchina Saizi yechigadzirwa: 41.5CM *32CM *61CM
Frequency: Kubva 2-7 S/per bhora Machine Net Weight: 21 kgs-Inotakurika zvakanyanya
Mushure mekutengesa sevhisi: Siboasi After-sales timu yekutevera kusvika yagadziriswa Bhora kugona: Aigona kubata mabhora makumi masere
Simba (Magetsi): 110V-240V AC SIMBA Warranty: 2 makore Warranty yesquash muchina
Zvikamu zvakakosha: Remote control,chaja,tambo yemagetsi,bhatiri reremote Packing Gross Weight 31 KGS -Mushure mekurongedza
Bhatiri Rinochajwa: Kutora anenge maawa matatu Packing measure: 53 * 45 * 75cm (Mushure meCarton nemapuranga bhaa Packing)